ခါးတာနဲ့ ချဉ်တာနဲ့ကလွဲပြီး…. ဘာအရသာမှ မထွက်လာဘူးပဲ….
တိတ်တိတ်ငိုကြွေး မျှော်လွမ်းခဲ့ တစ်ညနေ.....
တစ်ရက် တစ်ညနေလေးတောင် မခံစားနုိုင်ဘူး.....။
တနင်္ဂနွေတစ်ရက်နဲ့ ကြေအေးပါ မောင်....။
Posted by အခါးမိုး at 4:20 PM3comments:
Posted by အခါးမိုး at 10:28 PM 1 comment:
Labels: Gtalk Status လေးတွေ, အချစ်အကြောင်းလေးများ
မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ အပြုံးဆိုတာ ... တစ်ကယ်တမ်းတော့ ... ကန့်လန့်ကာ နောက်ကွယ်က အငိုဆိုတာ ... မောင် မသိခဲ့လေသလား ~~(သမီးဆိုး)
''' အဲဒီတော့ မင်းက မကျေနပ်ဘူးလား...မင်းသူများ မတ်ဆေ့ခ်ျတွေ ဖွင့်ဖတ်တယ်ဆိုတာ အဲဒါ Personal ကွ''''
ကျွန်မ နားမကြားလိုပါ....ကျွန်မနားတွေ အူနေလျှင် ထုံထိုင်းနေလျှင် ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲ....
'''' အဲဒီ့တော့ စိတ်မဆိုးရဘူးပေါ့ဟုတ်လား....မိန်းမတိုင်းက အဲလိုခံစားရမှာပဲ မဟုတ်ဘူးလား..."''
'''' မင်းက အဲလိုမိန်းမမျိုးလား...ဒီပြင့်မိန်းမတွေဘယ်လိုတွေးတွေး အဲဒီ့ထဲမှာ မင်းမပါရဘူး...''''''
စကားလုံးတွေ မကြားလိုပါ...ကျွန်မ ထိုနေရာတွင် ဖြုတ်ခနဲ မေ့လဲသွားချင်သည်....မောင့်၏ အတ္တကို ကျွန်မ မလွန်ဆန်နိုင်ပါ....ကျွန်မအသက်ထက်ပင် ချစ်ရသော ကျွန်မ၏ချစ်သူသည် နားလည်မှု၊ ပေးဆပ်မှု၊ သဘောထားကြီးမှုများဟု ခေါင်းစဉ်တပ်ထားသော ကျွန်မ၏ သည်းခံနိုင်မှုများကို အတင်းလောဘတကြီး သိမ်းကြုံးယူနေဆဲဖြစ်သည်...တခြားကောင်မလေးများနှင့် မောင် အပြန်အလှန်ပြောထားသော မတ်ဆေ့ခ်ျများကို ကျွန်မဖတ်မိခြင်းသည် ကျွန်မ အပြစ်လေလား....
..ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပြန်ပြောရလျှင် ယောင်္ကျားသိပ်မဆန်ပါနဲ့မောင်ရယ်.....
မောင် ကျွန်မကိုချစ်မှန်း သိပါတယ်....အချိန်တန်လျှင် မောင်လက်ထပ်ယူမည့်သူမှာလဲ ကျွန်မပါပဲ..... ထိုသို့ဆိုတိုင်း ကျွန်မက စိတ်ချလက်ချနေရကြေးလား.....စိတ်မချနိုင်ပါ မခွဲဝေပေးနိုင်ပါ....မောင့်ကို လွတ်လပ်ခွင့်ပေးရလောက်အောင် ကျွန်မ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အထင်မကြီးပါ မောင်ရယ်....
တမြို့တည်းမှာနေပြီး နေ့တိုင်းရောက်မလာတတ်သော...... ကျွန်မကတော့ တနေ့လုံး သတိတွေရပြီး မောင်ကတော့ ညနေထိ ဖုန်းတချက်မဆက်တတ်သော.....မနေနိုင် မထိုင်နိုင် ကျွန်မကသာ ဖုန်းစဆက်မိတတ်သော.... ကျွန်မ နည်းနည်းလေး ရစ်မိလျှင် စိတ်တိုတတ်သော..... စိတ်ဆိုးလျှင် ဖုန်းချပစ်တတ်သော... .ညဘက်ဖုန်းပြောနေရင် အိပ်ပျော်ပျော်သွားတတ်သော..... လူရှေ့သူရှေ့တွင် စိတ်မထင်ရင် မထင်သလို ငေါက်တတ်သော....ကျွန်မဝယ်ပေးတတ်သော ပစ္စည်းတွေကို ဘယ်တော့မှ စိတ်တိုင်းမကျသော ကျွန်မ၏ ချစ်သူအား ကျွန်မချစ်သည်....
ပိတ်ရက်မရှိသော မောင့်အလုပ်၏ စိတ်ဖိစီးမှုကို ကျွန်မထက်ဘယ်သူက ပိုသိနိုင်ဦးမလဲ... .အိမ်ကိစ္စအဝဝကိုတာဝန်ယူပေးနေသော....မိဘများအား လိုလေသေးမရှိ ထားပေးချင်သော စိတ်ဖိစီးမှုများကြားမှ ကျွန်မရစ်မိသောနေ့သည် မောင် ဥပေက္ခာပြုခြင်းအပြင် ဘာမှပိုမရတတ်ခဲ့ပါ.... ကျွန်မနှင့်ချိန်းထားသော ရှားပါးနေ့ရက်များတွင်ပင် အလုပ်ကိစ္စရှိပါက မောင်က အလုပ်ကိုသာသွားသော သူဖြစ်သည်...
''' မောင်က မတွေ့ချင်ဘူးပေါ့...'''
''' မင်း ကလေးလား...မောင်အခု အလုပ်သွားလုပ်နေတာ အလေလိုက်နေတာမဟုတ်ဘူး...ပြီးတော့ ပိုက်ဆံက ဘယ်သူ့အတွက်ရှာနေတာလဲ...မသိတာလဲမဟုတ်ဘူး....''''
ထိုသို့ မောင်ဆိုလျှင် ကျွန်မသာ လူဆိုးမ ဖြစ်ရသည်။ လူဆိုးမပဲ ဖြစ်ပါရစေတော့မောင်.... .မောင့်အနားမှာ နေချင်တယ်....မောင့်စိတ်ထဲပျော်နေလား...ဝမ်းနည်းနေလား....စိတ်ပူနေလား.....စိတ်ဆိုး နေလား ...ကျွန်မ အနီးကပ်ထိုင်ကြည့်နေမှ ဖြစ်မှာမို့လို့ပါ.....
''''မင်းနေ့တိုင်းတွေ့ချင်ရင် မင်းမောင့်ကို ယူလိုက်လေ''''...မောင်ထိုသ်ို့ပြောလျှင် ကျွန်မ မောင့်ကို ခုချိန်လက်မထပ်နိုင်သေးပါ... ကျွန်မတို့ ချမှတ်ထားသော အချိန်အတိုင်းအတာလေး တစ်ခုထိ လျှောက်ချင်သေးသည် .... ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်၏ အနာဂတ် ပလန်လေး လှပစေချင်သေးသည်.....
မောင်ဘယ်လိုပဲဆူဆူ.... မောင်ဘယ်လိုပဲငေါက်ငေါက် ကျွန်မအခုချိန်လဲ မောင့်ကိုတွေ့ချင်သည်... .မောင့်ကို စက္ကန့်နဲ့အမျှသတိရနေပြီး မောင့်အနားမှာ လိုတာလေးတွေ ဖြည့်ဆည်းပေးချင်သေးသည်.... ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ စိတ်ကို မောင်နားလည်နိုင်လျှင် ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်မလဲ....
'''ချစ်ရတာ အရမ်းပူလောင်မှန်း ချစ်ရတဲ့သူကလွဲပြီး ဘယ်သူက သိနိုင်မှာလဲ''''
'''ဟင့်အင်း မောင့်ကို မချစ်ရင် ကျွန်မမှာ လုပ်စရာအလုပ်မရှိတော့လို့ပါ.....'''''
Posted by အခါးမိုး at 8:30 PM2comments:
Labels: စပျစ်သီးလေးများ, အချစ်အကြောင်းလေးများ
ကျေးဇူးပြုပြီး ဘာမှမပြောပါနဲ့လေ..။ ကျွန်မက သဘောထားကြီးပါတယ်..။ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီလို သဘောထား ကြီးလိုက်တာဆိုတဲ့ အံ့သြမှု ကျေးဇူးတင်မှုလေးရဖို့ အတွက် ပေးဆပ်လိုက်ရတဲ့ အရင်းအနှီးတွေတော့ အများကြီးပါပဲ ။ (ဂျူး-အမှတ်တရ)
အချစ်တဲ့... ကျွန်မနှင့်အချစ် အချစ်နှင့်ကျွန်မသည် အမြဲတမ်း ပေးဆပ်ရခြင်းတွေနဲ့ တွဲရက်ကြီး တည်ရှိနေသလား...
အိမ်မက်တွေ...ကျွန်မ၏ အိမ်မက်တိုင်းမှ ဗီလိန်တိုင်းသည် သူမဖြစ်သည်...မောင့်၏ တစ်ချိန်က နတ်သမီးဆိုသော သူမသည် ယခု ကျွန်မမက်သော အိမ်မက်တိုင်းတွင် ဗီလိန်အဖြစ်ရောက်ရှိလာခဲ့တာ လချီနေခဲ့ပေသည်....
သူမကိစ္စနှင့်ပက်သက်၍ မောင်နှင့်ကျွန်မ စကားများ စိတ်ဆိုးသည့် နေ့ရက်မှာတောင် ကျွန်မမငိုမိခဲ့ပါ..... တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ရန်ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ရက်တွင် ကျွန်မသည် သူမအား အရှင်လတ်လတ်တွေ့လိုက်မိခြင်းကိုက အိမ်မက်များ၏ အစဖြစ်သည်....သူမကို တွေ့တွေ့ခြင်း ထိုနေရာတွင် တုတ်တုတ်မလှုပ်နိုင်ခဲ့သော ကျွန်မ။ ကိုယ်ကသာ သူမကိုသိပြီး သူမက ကိုယ့်ကို မသိရကောင်းလားဆိုပြီး မဆီမဆိုင် လောကဓံကို ကျိန်ဆဲနေသော ကျွန်မ။ မောင်ရေ မောင့်ရဲ့နတ်သမီးကို အပြင်မှာ မြင်ဘူးခဲ့ပြီလို့ စိတ်ထဲက တမ်းတမိသော ကျွန်မ။ ထိုနေ့က ရှော့ပင်းမောလ်ထဲမှ အတင်းပြေးထွက်မိသော အရူးမတစ်ယောက်လို ကျွန်မ။ ဘယ်သူတွေများ ကိုယ်ချင်းစာနိုင်ပါ့မလဲ.....
ထိုအကြောင်းမောင့်ကို ပြောပြမိလျှင် မောင်ဘာပြောမလဲလို့ ကျွန်မမခန့်မှန်းနိုင်ပါ...အရင်တုန်းက ကိစ္စတွေ မမေးကြေးလို့ မောင်ပြောခဲ့သောညနေက ခေါင်းငြိမ့်ထောက်ခံခဲ့တာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်သည်....
မောင်၏စကားတွေထဲတွင် ပထမဆုံးကြားမိသော ထိုနာမည်ပိုင်ရှင်သည် အရမ်းရင်းနှီးသော မိတ်ဆွေတစ်ယောက်အနေနဲ့ပဲမဟုတ်လား...မထင်မှတ်သောနေ့တစ်နေ့တွင် မောင့်ရဲ့မေးလ်ထဲတွင် နတ်သမီး၏ သီချင်းတွေ၊ မောင့် စကားသံတွေကို မြင်ခဲ့မိလိုက်သည်...ငတုံးမလို့ ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ ရွတ်ဆို ပေါက်ကွဲခဲ့ဘူးသည်...
အဲဒါ မင်းကိုယ်မင်းဒုက္ခရှာတာပဲဟု မောင်စွပ်စွဲမှာကြောက်ပါသည်...နတ်သမီး၏Facebook စာမျက်နှာပေါ် ခဏခဏတက်ကြည့်ဖြစ်နေသော ထိုမျက်နှာ၊ ထိုအပြုံးတွေ။ မောင့်ကို လွမ်းတဲ့ညက ကွန်ပျူတာထဲမှ မောင့်အရင်ဓါတ်ပုံများကိုဖွင့်ကြည့်ရင်း တွေ့လိုက်မိသော နတ်သမီးရဲ့ဓါတ်ပုံတွေ။ ဓါတ်ပုံထဲရှိမောင့်အပြုံးကို မြင်လိုက်ချိန်တွင် ကျွန်မကိုရောထိုအပြုံးမျိုးဖြင့် ကြည့်ခဲ့ဘူးရဲ့လားဆိုသော အတွေးက တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ခဲ့ဘူးသည်....
ကျွန်မမရှိခင်အချိန်က မောင့်ဘဝသည် ထိုကဲ့သို့ ပြီးပြည့်စုံခဲ့သည်လား....ထိုပျော်ရွှင်မှုများ မောင့်ထံတွင် ဘယ်လောက်ကြာခဲ့သလဲ...နတ်သမီးသည် မောင့်မျှော်လင့်ချက်ကို ဘယ်အချိန်မှာ ရိုက်ချိုးခဲ့တာလဲ...
နတ်သမီးသည် လက်ထပ်ဖိတ်စာပို့ခြင်းဖြင့် မောင့်ကိုရက်စက်ခဲ့သူလား....မောင်ကကော ဘယ်လိုသဘောထားကြီးခြင်းမျိုးနှင့် လမ်းခွဲခြင်းကို လက်ခံခဲ့တာလဲ... သိချင်သည်....
ကျွန်မချစ်သောမောင်သည် ထိုသို့သော သဘောထားကြီးသူလား....စိတ်ဆိုးလျှင် အရင်ဖုန်းချပစ်တတ်သော....ခဏခဏပြန်ခေါ်မိလျှင် ဖုန်းပိတ်ပစ်တတ်သော....၁ရက် ၂ရက်လောက် ဖုန်းမကိုင်ပဲ ပစ်ထားတတ်သော မောင်သည် နတ်သမီးအတွက် ဘယ်လိုချစ်သူမျိုးလဲ ကျွန်မသိချင်သည်....
ကျွန်မသည် မောင့်အတွက် အကောင်းဆုံးသော အဖော်တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့သည်.... ချစ်သူအတွက် လောကဓံ၏ အကောင်းအဆိုးကို မျှဝေခံစားပေးချင်သည်..
''စိတ်ညစ်တယ် အမရယ်... ရင်ဖွင့်စရာဆိုလို့ အမတို့ပဲရှိတာ""....
နတ်သမီးထံပို့ခဲ့သော မောင့်၏ ဂျီတော့စာသားကိုတွေ့လိုက်ချိန်တွင် ကျွန်မ၏မျှော်လင့်ချက် ကလေး ဝေဝါးခဲ့ရသည်.... မောင့်၏ အားကိုးရာအထောက်အပံ့တစ်ခုဖြစ်ဖို့ အသည်းအသန် ကြိုးစားနေသော ကျွန်မအတွက် မခံစားနိုင်ခဲ့ပါ....
ကျွန်မက ဘာလဲ ဟုမောင့်ကိုမေးခဲ့မိသည်....ဟုတ်တယ် ကျွန်မကဘာလဲ....
ကျွန်မသည် မောင့်လိုစကားမတတ်သူပါ....ချစ်သူ၏ စိတ်ညစ်ခြင်း၊ စိတ်ရှုပ်ခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးခြင်းများကို မျှဝေခံစားရမည်မှာ ကျွန်မတယောက်တည်း သာ ဖြစ်ရမည်... ကျွန်မ အတ္တကြီးချင်တယ်....
ကျွန်မသည် မောင့်ကိုချစ်သည်....မောင်၏ နတ်သမီးကိုလဲ ကျွန်မ မမုန်းလိုပါ....သို့သော် ထိုနတ်သမီးသည် ကျွန်မ၏ မသိစိတ်ထဲတွင် ဗီလိန်အဖြစ်နေရာယူခဲ့လေပြီ...
အစွဲအလမ်းကြီးသော ကျွန်မ..ဖြစ်ချင်တာ ပြောချင်တာများ ခံစားချက်များ ပြင်းလာခဲ့လျှင် အိမ်မက်မက်တတ်သော ကျွန်မ...အိမ်မက်များတွင် နတ်သမီးသည် ဗီလိန်ဖြစ်သည်..
နေ့လည်ပိုင်းတွင် အလုပ်ထဲမှအဆင်မပြေမှုများကို ညဘက် အိမ်မက်မက်မိလျှင် နတ်သမီးသည် အလုပ်ထဲမှဗီလိန်ဖြစ်သည်... သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်လျှင် နတ်သမီးသည် သူငယ်ချင်းဗီလိန်ဖြစ်သည်....
တောင်းပန်ပါတယ်မောင်ရယ်....ကျွန်မအမှန်တကယ် သဘောထားကြီးသူပါ.....နတ်သမီး ဗီလိန်ဖြစ်သွားခြင်းသည် ကျွန်မ၏ လူမမြင်သော အတ္တတစ်ခုကြောင့်သာ ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံရင်း။
Posted by အခါးမိုး at 10:41 PM4comments:
မိုးလင်းထိထိုင်ခေါ်နေလဲ ဒီလူလုပ်ထားတဲ့ အော်တိုစက်က ဒါပဲပြောနေမှာပဲလား….
လူတကာလိုက်ပြောလဲ နည်းတောင်နည်းသေးတယ်လို့ ပြောကြဦးမယ်….
အမှတ်က အမှတ်…သည်းခြေက သည်းခြေပဲ….
‘မင်းက ဘာမှမမှတ်ထားပေးဘူး’ ….
ဒုန်း ဒုန်း ဒုန်း...
Posted by အခါးမိုး at 8:13 PM3comments:
Gtalk Status လေးတွေ (14)
သည်အရာကိုမရမီက ကျွန်မသည်..... သည်အရာကိုမျှော်လင့်ခြင်းဖြင့်အသက်ရှင်နေသည်ဟုထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခဲ့သည်...သို့သော်သည်အရာကိုရပြီးသည့်နောက်တွင်ကျွန်မသည်ထိုအရာကိုထပ်မံမျှော်လင့်ပြန်သည်။ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူသည်အလွန်လောဘကြီးပါသည်။ (ဂျူး- ကောင်းကင်မပါသောည)
ချစ်ခြင်းအဆုံးသတ် ( အပိုင်း ၁)
အချစ်တခုကို အချစ်တခုဖြင့်  အဆုံးသတ်သင့်  မသင့်  ကို ဆုံးဖြတ်ရန်မှာ အချစ်လမ်းကြောင်းတူသော လူနှစ်ယောက်သာ လိုသည်။ ချစ်ခြင်း Intro ...
----------- PS.စကားမပြောသေးသော ချစ်သူအတွက်..။
မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ အပြုံးဆိုတာ ... တစ်ကယ်တမ်းတော့ ... ကန့်လန့်ကာ နောက်ကွယ်က အငိုဆိုတာ ... မောင် မသိခဲ့လေသလား ~~(သမီးဆိုး) ''...